Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jarmalka Jebinta Wararka » Lufthansa waxay kasbatay lacag dheeri ah suuqa caasimada
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Iyada oo la meeleeyay dammaanad shirkadeedkii ugu dambeeyay bishii Febraayo 2021, Lufthansa Group waxay horey u xaqiijisay dib u maalgelinta dhammaan deymaha maaliyadeed ee dhacaya 2021 waxayna sidoo kale dib u bixisay amaahda KfW ee 1 bilyan oo euro ka hor waqtiga.
Dammaanadda labaad ee shirkadda ee ah 1 bilyan oo euro oo la soo saaray 2021.
Ku meelaynta laba bisil oo ah saddex iyo siddeed sano oo dhammaystiraya muuqaalka qaangaarnimada Kooxda Lufthansa.
Lacagta muddada-dheer ee la aruuriyay waxaa loo isticmaali doonaa in lagu sii xoojiyo xisaabtanka Kooxda Lufthansa.
Deutsche Lufthansa AG ayaa markale si guul leh u soo saaray curaar wadar ahaan dhan 1 billion euro. Curaarta oo leh 100,000 kun oo yuuro ayaa la dhigay laba qaybood oo leh muddo saddex iyo siddeed sano siday u kala horreeyaan iyo mug dhan 500 milyan oo yuuro: Qaybta oo leh muddo illaa 2024 waxay dulsaar ku tahay boqolkiiba 2.0 sanadkii, qaybta ayaa ku bislaata 2029 boqolkiiba 3.5.
Iyadoo la dhigayo dammaanad shirkadeedkii ugu dambeeyay bishii Febraayo 2021, kooxdu waxay horeyba u xaqiijisay dib-u-maalgelinta dhammaan deymaha maaliyadeed ee dhacaya 2021 waxayna sidoo kale dib u bixisay amaahda KfW ee 1 bilyan oo euro ka hor waqtiga. Lacagta muddada-dheer ee hadda la ururiyey waxaa loo isticmaali doonaa in lagu sii xoojiyo Kooxda LufthansaDaacadnimadiisa.
“Meeleynta soo noqnoqotay ee ku xirnaanta curaarta shirkaddu waxay mar kale xaqiijineysaa helitaanka aan u leenahay qalab maaliyadeed oo faa'iido leh. Labada qaybood ee saddexda iyo siddeed sano ka badan waxay ku habboon yihiin muuqaalkeenna qaangaarnimada. Intaa waxaa sii dheer, waxaan ka heli karnaa maalgelin suuqa suuqyada marka loo eego heerarka wanaagsan marka la barbar dhigo tallaabooyinka xasilinta. Waxaan sii wadeynaa inaan si nidaamsan uga shaqeyno talaabooyinkeena dib u qaabeynta si aan ugu celino talaabooyinka xasilinta dowlada sida ugu dhaqsiyaha badan ee suuragalka ah, ”ayuu yiri Remco Steenbergen, Madaxa Sarkaalka dhaqaalaha ee Deutsche Lufthansa AG.
Laga soo bilaabo Maarso 31, Kooxda waxay haysay lacag caddaan ah iyo lacag u dhiganta 10.6 bilyan oo Yuuro (oo ay ku jiraan lacago aan la aqoon oo ka yimid xirmooyinka xasilinta ee Jarmalka, Switzerland, Austria iyo Belgium). Waqtigaas, Lufthansa waxay isticmaashay kudhowaad 2.5 bilyan oo euro oo ka mid ah xirmooyinka xasilinta dowladda ee 9 bilyan oo euro.
Marka lagu daro arrinta curaarta maanta, Kooxda Lufthansa waxay sii wadaysaa diyaargarowga kordhinta raasamaalka. Dakhliga saafiga ah wuxuu gacan ka geysan doonaa gaar ahaan dib u bixinta tallaabooyinka xasilinta ee Sanduuqa Dhaqaalaha ee Jarmalka (ESF) iyo soo celinta qaab dhismeedka raasumaalka muddada-dheer ee waara iyo hufan. Guddiyada Fulinta iyo Kormeerku wali go'aan kama gaarin cabirka iyo waqtiga kordhinta suurtagalka ah ee raasumaalka. Intaa waxaa dheer, oggolaanshaha ESF ee tan waa in la helaa.